Eo an-toerana: Manangana Database Desktop mba hampivelatra sy handefasana ny tranokalan'ny WordPress | Martech Zone
Eo an-toerana: Manangana Database Desktop mba hampivelatra sy handrindrana ny tranokalanao WordPress
Alatsinainy, Septambra 28, 2020 Alatsinainy, Septambra 28, 2020 Douglas Karr
Raha nahavita fivoarana WordPress be dia be ianao dia fantatrao fa matetika no mora kokoa sy haingana kokoa ny miasa amin'ny biraonao na ny solosainao eo an-toerana noho ny manahy momba ny fampifandraisana lavitra. Ny fihazakazahana lozisialy iray eo an-toerana dia mety ho fanaintainana, na dia… toy ny fananganana aza MAMP or XAMPP hanombohana mpizara tranonkala eo an-toerana, handraisana ny fiteninao amin'ny programa, ary avy eo mifandray amin'ny data-nao.
Tsotra ny WordPress raha amin'ny fijerin'ny maritrano… mihazakazaka PHP sy MySQL amin'ny NGINX na Apache Server. Ka noho izany, ny fanipihana maritrano server iray manontolo amin'ny solosainao findainao dia mety ho taonina mihoatra ny iray taonina… raha tsy hiresaka afa-tsy ny tena fandefasana ny mpizara tranonkala, handefa ny mpizara data ary hampifandray azy roa!
Eo an-toerana: Fametrahana WordPress iray Click iray
Ny eo an-toerana dia mahatonga ny famoronana tranokala WordPress eo an-toerana ho rivotra be, noho izany dia tsy mila misahirana amin'ny fametrahana azy ianao. Tsindrio iray ary vonona ny handeha ny tranokalanao - tafiditra ao ny SSL! Ny lisitry ny endri-javatra dia tsy mampino!
Serivisy amin'ny tranokala - Serivisy zanatany, PHP haavo OS, MYSQL, serivisy mpizara tranonkala. Ampifanaraho amin'ny fanitsiana ny fisie amina kinova PHP tsirairay, NGINX, Apache, ary MySQL.
Fitantanana ny tranokala - Fivarotana mafana eo anelanelan'ny NGINX na Apache, kinova PHP (5.6, 7.3 ary 7.4 miaraka amin'i Opcache), ary ny URL an'ny tranokala. Ny fisie rakitra amin'ny kinova PHP tsirairay, NGINX, Apache, ary MySQL dia miharihary avokoa.
Toerana clone - Ny rakitra, databases, configurations rehetra, ao anatin'izany ny URL ny tranokala dia azo ovaina sy voatonona soa aman-tsara.
Debug - debug haingana PHP (Xdebug azo alaina ao amin'ny Tranonkala fanampiny)
Tionelina HTTPS - Ny taratasy fanamarinana nosoniavin-tena dia noforonina ho an'ny tranonkala vaovao. Torolàlana momba ny tranokala nomen'ny Ngrok, URL maharitra miaraka amin'ny fetra fifandraisana ambony kokoa, webhooks andalana fitsapana, PayPal IPN, ary API fialan-tsasatra
WordPress Multisite - Fanohanana ny fametrahana subdomain sy subdirectory miaraka amin'ny tsindry iray hanindriana ny subdomain ho an'ny rakitra host.
Site Blueprints - tehirizo ny tranokala rehetra ho toy ny drafitra hampiasa indray rehefa avy eo. Haverina amin'ny laoniny ny rakitra, data, rakitra fisie rehetra ary ny toerana misy anao.
Import / Export - ahitanao ireo rakitra an-tranonkala, data-data, fisie config, fisie log, ary fikirana eo an-toerana. Aza ariana ny fisie avy amin'ny fanondranana anao toy ny arisiva, PSDs, lahatahiry .git, sns.
Mail - MailHog dia tafiditra mba hisakanana ny mailaka rehetra mivoaka avy amin'ny mailaka PHP mba hijerena sy hanafoanana (midika koa izany fa afaka mitsapa mailaka ianao mandritra ny ivelan'ny fotoana).
SSH + WP-CLI - Fandraisana SSH faka tsotra amin'ny tranokala tsirairay. Nanome WP-CLI, tsindrio fotsiny ny "wp" aorian'ny fanokafana ny tranokala SSH.
Support - misy ny Community Forums, ny fanampiana ao amin'ny app ary ny tapakila.
Mandrindra sy manaparitaka avy eo an-toerana mankany amin'ny Flywheel na WPEngine
Mbola tsara kokoa aza, ny ohatra eo an-toerana dia azo ampitaina sy ampifanarahana amin'ny mahafinaritra sasany WordPress nahomby fampiantranoana tolotra:
Mampiasà WordPress - to Flywheel ny famokarana, Flywheel fampisehoana, na ny WP Engine
MagicSync - ireo rakitra efa niova ihany no haseho rehefa mihetsika eo anelanelan'ny tontolo iainana.
Ampidino eo an-toerana
Fambara: mpiara-miasa amin'i Flywheel (fampiantranoana eto no tranokalanay!) ary WP Engine.
Tags: Apacheconfigdebug wordpressmanaparitaka wordpressflywheelfampandrosoana eo an-toeranafisie rakitramagicsyncFimihazakazaka wordpress eo an-toeranafandefasana hafatrafampifanarahana wordpresssynch wordpressWordPressblueprints WordPressWordPress hostingwp-KHwpengine
PartnerStack: Tantano ny mpiara-miasa aminao, ny mpivarotra ary ny mpiara-miasa aminao